ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ လိပ်စက်ဘီးဘဲလ် မှအရည်အသွေးမြင့် လိပ်စက်ဘီးဘဲလ် ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
JANG HORNG ENTERPRISE CO.,LTD. ကိုအထူးပြုတဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သောကျောက်ထုတ်ကုန်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါသည် လိပ်စက်ဘီးဘဲလ်။ ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအော်တိုအီလက်ထရွန်းနစ်ထုတ်ကုန်များ, ထုတ်ကုန်များ၏လျင်မြန်တဲ့ updates တွေကိုပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာစားသုံးသူ '' ဝယ်လိုအားအညီသစ်ဆန်းသောဒီဇိုင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့်ယာဉ်မောင်းများအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်စည်လောကီသားတို့သည်အသွားကြကုန်အံ့။ ငါတို့သည်သင်တို့အသင့်တော်သောစျေးနှုန်းနှင့်ပြည့်စုံသောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အသစ်အဟောင်းဖောက်သည်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
ပုံစံ - JH-813P/JH-813Y
ထုပ်ပိုးသည်:1pc/PE,10 PCS/သတျတော.200 PCS/CTN.၂.၂ အုပ်.
ဆး.ဒဗလျူ.:၁၄ ကီလိုဂရမ်ဂျီ.ဒဗလျူ.:၁၆ ကီလိုဂရမ်
ထိပ်တွင်ချစ်စရာလိပ်ရုပ်ငယ်လေးနှင့်ပန်းရောင်အဖုံး–စိတ်ဝင်စားစရာပါ&နှစ်သက်ဖွယ်ဒီဇိုင်း,ဤစက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည် ၀ ယ်သူတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်စက်ဘီးအသုံးအဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bike-bell.com/my/turtle-bike-bell.html
အကောင်းဆုံး လိပ်စက်ဘီးဘဲလ် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် လိပ်စက်ဘီးဘဲလ် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ လိပ်စက်ဘီးဘဲလ် ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
ပစ္စည်း:ထိပ်တန်း-အလွိုင်း,အခြေခံပလပ်စတစ်.အရွယ်အစား:၃၈ မီလီမီတာထုပ်ပိုးသည်:1pc/PE,20 PCS/သတျတော.200 PCS/CTN.၁.၁ အုပ်.ဆး.ဒဗလျူ.:7 KGS G.ဒဗလျူ.:၉ ကီလိုဂရမ် အပေါ်တွင်ချည်ထားသောအရုပ်နှင့်ချစ်စရာကောင်းသောပုံစံ-ထူးခြားသောနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောဒီဇိုင်း,ဤစက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်ကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်မရှိမဖြစ်စက်ဘီးအသုံးအဆောင်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် အသံမြည်သည်&ရှင်းလင်းသော-ရှင်းလင်းပြီးကျယ်လောင်သောဖုန်းမြည်သံသည်လမ်းသွားလမ်းလာများအားလျင်မြန်စွာသတိပေးနိုင်ပြီးလုံခြုံသောစီးနင်းမှုကိုပေးနိုင်သည်.လက်ရာမြောက်သော&တာရှည်ခံသည်-ဂန္ထဝင်လူမီနီယံခေါင်းလောင်း၏မျက်နှာပြင်ကိုသံချေးတက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်၎င်းကိုတာရှည်ခံ။ လှပစေသည် အသုံးပြုနိုင်သောစက်ဘီးအမျိုးအစားများ-လက်ကိုင်အချင်း ၂၂ ရှိစက်ဘီးအများစုအတွက်သင့်တော်သည်.၂ မီလီမီတာ,စက်ဘီးအမျိုးအစားအများစုအတွက်သုံးနိုင်ပါတယ်,စကူတာများ,သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ,စသည်တို့. တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်-ခက်ခဲသောတပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မရှိပါ,အလွယ်တကူတပ်ဆင်ရန်ဝက်အူလှည့်တစ်ခုသာလိုသည်.ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိလျှင်,ကျေးဇူးပြုပြီးမနေပါနဲ့’ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်
Lady Bug စက်ဘီးဘဲလ်
ထုပ်ပိုးသည်:1pc/PE,10/သတျတော,200pc/ctn.,2.2 cuft N ကို.ဒဗလျူ.:6 KGS G.ဒဗလျူ.:၈ ကီလိုဂရမ် ပစ္စည်း-ကျွန်ုပ်တို့၏ ladybug စက်ဘီးခေါင်းလောင်းကိုအလူမီနီယံနှင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအလွန်အကြမ်းခံသောအင်ဂျင်နီယာပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများဖြင့်ကြာရှည်အသုံးခံသည်. အသံကကြည်လင်သည်-ချစ်စရာစက်ဘီးခေါင်းလောင်းသံသည်ကလေးများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်,သေးငယ်ပြီးလက်ရာမြောက်သော,အသံကပြတ်သားသည်,အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်,ကျယ်လောင်ပြီးရှင်းလင်းသောဖုန်းမြည်သံများသည်သင့်ကလေးကိုလမ်းပေါ်တွင်လုံခြုံသောစီးနင်းမှုအတွေ့အကြုံပေးနိုင်သည်. ကာတွန်းဒီဇိုင်း-စတိုင်ကျသောအသွင်အပြင်နှင့်အတူစက်ဘီးလက်ကိုင်လက်စွပ် ဦး ချို,အဲဒါ’သင်၏စက်ဘီးကိုအလှဆင်ရန်အလွန်ကောင်းသည်,မိန်းကလေးများအတွက်စံပြ’၎,ယောက်ျားလေး’၎,ကလေးငယ်’၎,ကလေးများ’စက်ဘီး တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်-အတွင်းအချင်းတပ်ဆင်မှုအတွက်အများဆုံးအချင်း:0 အကြောင်း.၉၁ လက်မ.လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာတပ်ဆင်ခြင်း,ဝက်အူလှည့်ဖြင့်လက်ကိုင်ဘားတွင်ဝက်အူကိုတင်းကျပ်ပါ.
ထုပ်ပိုးသည်:1pc/PE,10/သတျတော,200pc/ctn.,2.7 cuft N ကို.ဒဗလျူ.:8 KGS G.ဒဗလျူ.:၁၀ ကီလိုဂရမ် ပစ္စည်း-ကျွန်ုပ်တို့၏ Bee စက်ဘီးခေါင်းလောင်းကိုအကြမ်းခံအင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးကြာရှည်အသုံးခံပါသည်. အသံကကြည်လင်သည်-ချစ်စရာစက်ဘီးခေါင်းလောင်းသံသည်ကလေးများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်,သေးငယ်ပြီးလက်ရာမြောက်သော,အသံကပြတ်သားသည်,အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်,ကျယ်လောင်ပြီးရှင်းလင်းသောဖုန်းမြည်သံများသည်သင့်ကလေးကိုလမ်းပေါ်တွင်လုံခြုံသောစီးနင်းမှုအတွေ့အကြုံပေးနိုင်သည်. ကာတွန်းဒီဇိုင်း-စတိုင်ကျသောအသွင်အပြင်နှင့်အတူစက်ဘီးလက်ကိုင်လက်စွပ် ဦး ချို,အဲဒါ’သင်၏စက်ဘီးကိုအလှဆင်ရန်အလွန်ကောင်းသည်,မိန်းကလေးများအတွက်စံပြ’၎,ယောက်ျားလေး’၎,ကလေးငယ်’၎,ကလေးများ’စက်ဘီး တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်-အတွင်းအချင်းတပ်ဆင်မှုအတွက်အများဆုံးအချင်း:၂၂ လောက်.2 မီလီမီတာ.လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာတပ်ဆင်ခြင်း,ဝက်အူလှည့်ဖြင့်လက်ကိုင်ဘားတွင်ဝက်အူကိုတင်းကျပ်ပါ.